Sharkoon Rush ER2, anyị nwalere nzọ akụ na ụba maka isi ekweisi dị mma | Akụkọ akụrụngwa
Sharkoon Rush ER2, anyị nwalere nzọ akụ na ụba maka isi ekweisi dị mma
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, anyị enweela ohere ịnwale otu ịkụ nzọ kachasị adọrọ mmasị, n'ihe gbasara okpu agha egwuregwu, nke Nkọ. Eziokwu bu na Mpaghara Shark H40 Ha karịrị okpu agha na-atọ ụtọ, mana ọ bụkwa eziokwu na ọnụahịa ha, ihe dị ka euro 50, nwere ike ime ka ị chee ọtụtụ ihe tupu ị nweta ụfọdụ karịa atụmatụ ha, mma, nkasi obi ma ọ bụ njirimara teknụzụ.
Aghọtara na, belụsọ na ịchọrọ ịnụ ụda ahụ na ogo dị ịtụnanya, nke ị ga-eji nnukwu ego, ị nwere ike idozi Sharkoon Shark Mpaghara H40, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ okpu ọnụ ala mana nke ahụ na-enye gị nke ahụ nke kachasị mma nke anyị niile na-achọ, ikekwe ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ịnweta ụfọdụ Nkọwacha Rush, ihe dị ọnụ ala karịa nke na-eme ka ha bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ iji nweta nguzozi ahụ n'etiti ekweisi dị mma nke na-enye ezigbo ụda, nwee igwe okwu dị mma yana, na mgbakwunye, ị nwere ike ịzụta ha na ego na-adọrọ mmasị.
1 Sharkoon Rush ER2, ekweisi dị mma dị maka ọnụahịa na-atọ ụtọ
2 Nkọwa na-adọrọ mmasị na atụmatụ nke Sharkoon Rush ER2
3 Ihe onye editọ kwuru na isi egwuregwu Sharkoon Shark Mpaghara H40
Sharkoon Rush ER2, ekweisi dị mma dị maka ọnụahịa na-atọ ụtọ
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ekweisi egwuregwu na ọnụ ahịa na-atọ ụtọ, Sharkoon Rush ER2, taa na-enweghị itinye ego ga-ekwe omume, ị nwere ike ịchọta ha n'ụlọ ahịa dị iche iche na ọnụahịa gburugburu 30 ma ọ bụ 32 euro. Ihe kariri ihe na-adighi nma bu na enyere otutu ekweisi a na agba di iche iche, oji nwere nkowa na ndu ndu, acha anụnụ anụnụ ma obu uhie ma obu ihe omuma karie ebe ichoro ocha, oji na oroma, dika i huru na-atọ ụtọ ka ị nwee ike ịzụta ndị kachasị amasị gị n'ihe gbasara agba agba.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụrụ na ị kpebie ịnweta Sharkoon Rush ER2, ị ga-eburu n'uche ụdị nsụgharị dị iche iche. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị maghị Sharkoon, gwa gị na anyị na ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na ịnye ndị ahịa ọtụtụ ngwaahịa ebe achọrọ ya, karịa ihe niile, inye nke ahụ edozi n'etiti ọnụahịa na arụmọrụ nke ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ gbasara ụlọ ọrụ a, m na-agba gị ume ka ị gụọ, ọ bụrụ na ịmebeghị ya, nyocha anyị na Sharkoon Shark Mpaghara H40, ntinye ebe ịchọta ngalaba nke anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ a n'ụzọ miri emi.
Nkọwa na-adọrọ mmasị na atụmatụ nke Sharkoon Rush ER2
Otu n'ime nkọwa na-adọrọ mmasị nke ekweisi egwuregwu a abụghị ihe ọ bụla karịa nkwakọ ngwaahịa ha, ihe kwesịrị ime ka o doo anya na, ọ bụ ezie na ọ dị ọnụ ala, anyị na-eche okpu agha ebe ngosi ha dị oke nlezianya. Ozugbo anyị mepere igbe anyị ga-ahụ ụfọdụ ekweisi na-enye ezigbo mmetụ, a Ọdụ mgbatị 2 mita, na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbatịkwuo eriri USB ahụ, nke dị mita 1 na akpa njem na-adọrọ mmasị. Dịka nkọwa, gwa gị na etinyere eriri ndị ọzọ na a pụtara isi wheel maka olu akara yana a gbanye ka ịgbanwuo igwe okwu ma gbanyụọ ya.
Aesthetically, ya kama ọchịchịrị imewe bụ karịsịa pụtara ìhè na niile nsụgharị, ma e wezụga n'ihi na-acha ọcha nlereanya, agbajikwa naanị site na ụfọdụ acha inserts, n'ihe banyere nke-acha anụnụ anụnụ unit nwalere. A na-ahụ nkọwa na-adọrọ mmasị na nke ahụ, na mpe mpe akwa nke ndị na-ekwu okwu n'onwe ha na nke dị na isi, anyị na-akụ nzọ dị mma ma dị ụtọ leatherette. N'oge a, gosipụta ihe dọọrọ uche m, ma ọ dịkarịa ala n'onwe ya, ọ bụghị onye ọzọ karịa eziokwu ahụ bụ na a na-agbakwunye ekweisi n'isi ahụ site n'ụdị nduzi ndị na-achọ ime ike ụfọdụ iji nwee ike ịkwaga ha, naanị ezughị ka ha ghara ịtọhapụ onwe ha mana ọ chọghị ike dị ukwuu iji dozie ha.
N'ikpeazụ banyere ihe njirimara ndị kachasị mma, na-agwa gị na dịka akwụkwọ ntanetị si dị, ụdị Sharkoon a pụtara maka ya Gram 266. N'otu oge ahụ ọ nwere ndị ọkwọ ụgbọ mmiri 40 mm bụ ndị impedance na-akpali n'ime 90 decibel na nzaghachi na-adọrọ mmasị na frequencies sitere na 20 ruo 20.000 Hz na impedance nke 32 Ohms na a 100mW kachasị ike. Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, enwere ike iji ekweisi ma na-ege ntị na nke a na-eziga ya site na igwe okwu na nyiwe dị iche iche dịka kọmputa, ngwaọrụ mkpanaka, PlayStation 4 ma ọ bụ Xbox One.
N'oge a, m ga-achọ ịgwa gị banyere ya ma banyekwuo n'ime m ahụmahụ m na okpu agha a. Onwe m ekwupụta na achọtala m nnọọ ala ebe ọ bụ na, ozugbo anyị malitere iji ha, ọ na-enye echiche na ha dị mma. Otu nkọwa ekwesiri iburu n'uche n'oge a bụ na, ọ bụrụ na ị na-eji ya ogologo oge, n'ihi na ntọala ya dịtụ nkenke na ntinye nke ekweisi gị anaghị emesapụ aka, ha nwere ike inye nsogbuN'aka nke ọzọ, ihe a na-ahụkarị n'ụdị ekweisi dị ọnụ ala.
Banyere ahụ erughị ala, nke bụ eziokwu bụ na ọ na-abịa mgbe ị jiri ha ihe karịrị awa abụọ, yabụ mụ onwe m na-arụ ụka na ọ bụ ihe nwere ike ime ọbụlagodi na okpu agha dị oke ọnụ. Onwe m, m ghọtara na nke a ga-abụ ihe na-adịghị mma na ihe omume na mmetụta a pụtara mgbe o jisịrị ha jiri ọkara otu awa ma ọ bụ otu elekere, ihe na-abụghị ikpe.
N'aka nke ọzọ, n'okwu banyere ụda dị mma, echere m na ọ bụghị ihe ọjọọ mana ọ bụkwa eziokwu na achọpụtara m na ikekwe bass enweghị ike ma ọ bụ ike na onye nwere ike na-eche mgbe ikekwe Emechara m belata treble a bit. Enwere ike idozi nke a, n'otu echiche, site na ịha nha anya. Banyere etiti etiti, eziokwu bụ na ụda dị mma dị mma. Maka akụkụ ya, igwe okwu na-ewepụta olu nke ọma ọ bụ ezie na ikekwe enwere ike ịchọ nhazi ọzọ iji nwee ike iweta ya nso ma ọ bụ kewapụ ya n'ọnụ.
Qualityda àgwà ya nso
Nhọrọ ndozi ole na ole
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Sharkoon Rush ER2, anyị nwalere nzọ akụ na ụba maka isi ekweisi dị mma
N’ikpeazụ Tiangong-1 ga-ada na Sọnde nke na-abịa
A na-akwụ ụgbọala kwụụrụ onwe ya ụgwọ maka ịbịaru onye na-agagharị agafe nso na ịnyịnya ọhịa na-agafe